लगातार बढेको सुनको मूल्य आज सोमबार घट्यो, तोलामा कतिमा कारोबार भयो त ? – Ap Nepal
लगातार बढेको सुनको मूल्य आज सोमबार घट्यो, तोलामा कतिमा कारोबार भयो त ?
काठमाडौं – सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार सुनको मूल्य बढेको थियो तर आज तोलामा ३ सय रुपैयाले घटेको छ । आइतबार तोलाको ९४ हजार १ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर ९३ हजार ८ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ९३ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेर तोलाको १ हजार ३ सय ५० रुपैयामा नै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि: यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (सूचीसहित)
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ ।
बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुन देशको मुद्राको दर कति ?
Prevतपाँईलाई थाहा छ? ‘कपिल शर्मा शो’का कलाकारले प्रत्येक एपिसोडमा कति लिन्छन् पा; रिश्रमिक ?
Nextआजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल जेष्ठ २५ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ जुन ८ तारीख